မြန်မာ့သိုင်း ထိပ်သီးပညာရှင်များ စုံညီပွဲတော်ကို မုံရွာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမည် - Yangon Media Group
မြန်မာ့သိုင်း ထိပ်သီးပညာရှင်များစုံညီပွဲတော်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာ မြို့ ပြည်သူ့အားကစားကွင်း၌ သြဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် ကျင်းပသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း မြန်မာ့သိုင်း ချစ်မြတ်နိုးသူများအဖွဲ့မှသိရသည်။ ယင်းပွဲတော်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့ရိုးရာသိုင်း ပညာသင်ဂိုဏ်းကြီးများမှ သက် ကြီးသိုင်းပညာရှင် ၂ဝ ကိုလည်း ရိုးရာသိုင်းပညာများသရုပ်ပြနိုင် စေရန် ဖိတ်ကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။
”ရှေးအစဉ်အဆက်ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ မြန်မာ့သိုင်းပညာကို မျိုးဆက်သစ်တွေ မြင်တွေ့သိရှိလေ့ လာခွင့်ရအောင်လို့ စီစဉ်တာပါ။ စုံညီပွဲမှာ ဆရာကြီးတွေရဲ့ သိုင်းပညာစွမ်းတွေကို လူငယ်တွေ ဝါသနာရှင်တွေ လက်တွေ့လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မုံရွာ မြို့နေ သိုင်းချစ်မြတ်နိုးသူများအ ဖွဲ့ဝင် ကိုဝင်းထိန်က ပြောသည်။
စုံညီပွဲတော်သို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းမှ သက်ကြီးသိုင်းပညာရှင်များ လက်ရှိသိုင်းပညာရှင်များ၊ သိုင်းဝါသနာရှင်များ၊ မျိုးဆက်သစ်သိုင်းကစားသူများအားလုံး စုံစုံညီညီတက်ရောက်ခွင့်ရရန် မြန်မာ့သိုင်းချစ်မြတ်နိုးသူများအဖွဲ့က ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့သိုင်းပညာစုံညီပွဲတော်တွင် သိုင်းပညာသမားစဉ်များနှင့် ပွဲတော်လှုပ်ရှားမှုများကို ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြီး မုံရွာဓာတ်ပုံအသင်းမှလည်း ရိုက်ကူးကာ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတစ်ရပ်ပါ ထည့်သွင်းကျင်းပသွားရန် စီစဉ် နေကြောင်း သိရသည်။
မယ်ဆိုင်ဂူ ကယ်ဆယ်ရေးတွင် သတင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖော်ပြပေးခဲ့သည့် သတင်းသမား သုံးဦးအား ဂ??
အိမ်ဆောက်ရန် အသုံးပြုနေသည့် ထန်းပင်နှင့် ဆီးပင်များကို ထင်းအဖြစ် ဝယ်ယူမှုများနေ
ရီးရဲလ်အသင်းသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ရန် ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း သတင်းများထွ??
ချန်ပီယံဆုအတွက် အားပြိုင်မှု အဆုံးမသတ်သေးဟု ကိုဗက် သတိပေး
မြန်မာ-ထိုင်းချစ်ကြည်ရေး တံတား၌ ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးကို ပြည်နှင် လွှဲပြောင်း